कोरोना टेम्पु र माइक्रोबसमा मात्र सर्छ, बसमा सर्दैन ? - News Bihani
काठमाडौं उपत्यकामा विगत तीन हप्तादेखि लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ भने सुरक्षा मापदण्ड तथा भौतिक दूरीको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । जनजीवन सहज बनाउन भन्दै आवश्यक मापदण्ड तयार गरी उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायदेखि निजी तथा सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । तर सरकारको नीति भने विभेदकारी देखिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासँगै भौतिक दूरी कायम राखी जोर बिजोर प्रणालीबाट निजी तथा सार्वजनिक गाडी चलाउन दिइएको भएपनि १६ सिट भन्दा माथिको सार्वजनीक सवारीसाधन मात्र चलाउन पाइनेछ तर त्यो भन्दा कम सिट भएको सवारीसाधन चलाउन पाइने छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ , के कोरोना पनि सिट क्षमता हेरेर सर्दछ ? किन कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा गरियो ? के सरकार सबैको होइन ? के सरकारले विभेद गर्न मिल्छ ? के टेम्पु र माइक्रोबसका कर्मचारीका परिवार छैनन् ? के उनीहरुलाई बिकल्प दिइएको छ ? हो सरकारको त्यो विभेदकारी अल्पदृष्टि निर्णयले काठमाडौं उपत्यकामा १६ सिटभन्दा तलका गाडी सडकमा गुड्न पाएनन् । सरकारको यस्तो निर्णयले अहिले १६ सिटभन्दा कम सिट क्षमता भएका सार्वजनीक सवारीसाधन धनी, चालक तथा सहचालकहरु राज्यमा अभिभावक बिहिन हुन् पुगेका छन् ।
सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक गाडीमा कुल सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्न पाइने भनिएको हुँदा टेम्पु र माइक्रोबस संचालनमा किन रोक लगाइयो ? भाडाका ट्याक्सीमा चालकसहित बढीमा तीन जना र परिवार भित्रकै बालबालिका भएमा थप दुई जनासम्म गरि ५ जना राख्न पाइने तर त्यति नै यात्रु अन्यमा किन नपाइने हो । हुन् त घरमा बसेर तलब खाइरहेकाहरु नै लकडाउन गनुर्पर्छ भनिरहेका छन् भने अहिले हुनेखानेलाई त कोरोना भन्ने बित्तिकै काल आए झैँ लाग्दछ । तर हुँदा खाने बर्ग अहिले रोगले भन्दा भोकले मर्ने अबस्थामा पुगिसकेको छ ।
अहिले यो अबस्थामा एउटा भनाइ सुहाउँदो छ-जसलाई हार खाने भय हुन्छ त्यो अबस्य नै हार्छ । अर्थात् जो परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर भाग्छ उ अबस्य सफल हुन् सक्दैन । त्यसो त १६ सिटभन्दा तलको सबै सवारीसाधन बन्द भएका पनि होइनन्, निजी सवारीमा त कोचाकोच गरेर यात्रु हिँडिरहकै छन् भने भाडामा यात्रु ओसारपासर भइरहेकै छ ।
९ जना अट्ने टेम्पोमा ४-५ जना चढ्दा, १२ जना अट्ने माइक्रोबसमा ६-७ जना चढ्दा कोरोना सर्ने तर ३२ जना अट्ने बसमा १६-१७ जना यात्रु चढ्दा कोरोना नसर्ने हो त सरकार ? हो आज टेम्पो र माइक्रोबसका पिडित मजदुरहरु यहि जवाफ मागिरहेका छन् । त्यसो भए १६ सिटको सवारीमा ८ जना यात्रु बस्दा नसर्ने कोरोना १२ सिटको सवारीमा ६ जना यात्रु बस्दा कसरी सर्छ । ३२ सिटको बसमा १६-१७ जना बस्नु र १२ सिटको माइक्रोबसमा ६-७ जना बस्नु दूरी त उत्तिकै कायम हुने हो नि ? तर सरकारको यो निर्णय अव्यवहारिक छ त्यसलाई सच्याउनु आबस्यक छ ।
शनिवार, भाद्र २७ २०७७०७:३५:०९